बि.सं.२०७४ साल मङ्सीर १९ गते मङ्गलवारको राशिफल
नेपाली मितिः वि.सं. २०७४ । नेपाल सं. ११३८ । योग सं. ३८ । मङ्सीर महिनाको १९ गते मङ्गलवार ।
अँग्रजी मितिः ई.सं. २०१७ डिसेम्बर महिनाको ०५ तारिख ।
तिथीः दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु पौषकृष्ण पक्षको द्वितीया तिथी, १७ः३५ बजेपछि तृतीया तिथी ।
योगः शुभ योग, २४ः४९ बजे पछि शुक्ल योग ।
नक्षत्रः मृगशिरा नक्षत्र, ०६ः५७ बजेपछि आद्र्रा नक्षत्र ।
करणः तैतिल करण ०६ः४६ बजेसम्म उपरान्त गर करण ।
काठमाडौंमा सूर्योदयः ०६ः४१ बजे ।
राहुकालः१४ः३० बजेपछि १५ः४९ बजेसम्म ।
यात्राः दक्षिण र पश्चिम दिशाको लागि उपयुक्त ।
मेष राशि हुनेहरुको लागि आज पुरुषार्थ बढ्ने र राम्रो उद्यम सम्पादनको दिन रहेपनि मुख्य ठानिएको काममा ग्रहको अबरोध देखिएको छ । अतिरिक्त पक्षमा ग्रहले राम्रै बल दिइरहेको देखिन्छ । कामकार्यमा रुचि बढ्ने छ । विशेष कार्ययोजना बन्नसक्ने छ । आफन्तीसँग भेटघाट हुने र सहयोग पनि पाइने छ । महत्त्वपूर्ण काममा आउने विघ्नता निवारणको लागि विघ्नहर्ता भगवान पवनपुत्र श्रीहनुमान जीको र श्री गणेशजीको दर्शन भक्ति उपयुक्त हुनेछ । आज यहाँलाई तीन अङ्क र हरियो रङ्गको प्रयोग गर्नु बढी फापसिद्ध बन्नसक्ने छ ।
वृष राशिका व्यक्तिहरुको लागि आज केही महत्त्वाकांक्षी प्रमाद्को साथमा मानसिक चञ्चलता बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । स्वकार्यलाई भन्दा परकार्यलाई प्रार्थमिकता दिने मनोविज्ञान बढ्नसक्ने हुनाले आफ्नै महत्त्वपूर्ण कार्यमा अधुरो रहन सक्नेछ । आज तपाईको बोलीवचनको अनर्थ लाग्नसक्ने पनि गोरच रहेकोले बोलीव्यवहारमा सावधानी अप्नाउनु बुद्धिमानी हुनेछ । सकारात्मक सोँचपूर्वक अघि बढ्नाले तथा होसविचार गरेर सावधानीपूर्वक गरेको जनव्यवहारले परिणाम राम्रो दिनेछ । भगवान श्री गणेशजीको सेवा आराधना हितप्रद हुनेछ ।
कन्या राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन मानसम्मान तथा उच्च संपर्क विस्तारको सम्भावना छ । सम्मानित स्थान प्राप्त हुनेछ, औकात अनुसारको जिम्मेवारी लिनु ठिकै पनि हुनेछ । व्यवसायिक उन्नति र आर्थिक लाभ हुनेछ । कार्ययोजनाको बारेमा छलफल हुने कुरालाई ग्रहले प्रसय दिइरहेको देखिन्छ तसर्थ कार्यको भावी रेखाङ्कन हुनसक्ने छ । आज यहाँलाई रातो रङ्ग, एक अंकको छनौट उपयुक्त हुनेछ भने ग्रहको अबरोधलाई निवारणको लागि गुरु गणपतिको एवम् हनुमानदेवको सेवा आराधना हितकर हुनेछ साथै दीनदुःखीलाई दान दिनु पनि उपयुक्त हुनेछ ।
तुला राशिहुनेहरुको लागि आजको दिन भलै अपेक्षित कार्यनै बनिहाल्न केही अफ्ठ्यारो देखिएको छ तर पनि अनपेक्षित कार्य बनेर सन्तोष गर्नसकिने सम्भावना छ । अध्यात्मिक तथा आस्तिक भावना बृद्धि हुने तथा धर्मकर्ममा मन जानाले धार्मिक कार्य सम्पादन हुनसक्ने देखिन्छ । जसले गर्दा मानसिक शान्ति मिल्नेछ साथै व्यवसायमा पनि मन एकतृत हुने तथा लक्ष्मी कृपा हुनेछ । आज अन्य भौतिक उन्नति गर्न पनि सक्नुहुने छ । यात्रायोजना एवम् नयाँ कार्यको थालनीको सम्भावनालाई पनि ग्रहले साथ दिइरहेको छ । नौ अंक पहेलो रंग र धार्मिक क्षेत्रलाई सहयोग गर्नुले अझ बढी भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
वृश्चिक राशिहुने व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन विलासिता तथा राजसी आहारले क्रमशः स्वास्थ्यमा समस्या देखिनसक्ने छ । कामकार्यमा पनि विभिन्न खालका अबरोधहरुको सामना गर्नपर्ने सम्भावनालाई गोचरले देखाइरहेको छ । आज दीर्घरोगीहरुले स्वास्थ्यमा अल्लि बढी ध्यान दिन जरुरी हुनेछ । दैनिक जिविकोपार्जन आदिको विषयमा पनि समस्या थपिनसक्ने भएको हुनाले संघर्षको सामना गर्ने मानसिकतामा बस्नु उपयुक्त हुनेछ । समय प्रतिकूल छ भनेर बुझ्न नसके अशान्ति हुन सक्नेछ र बुझेर धैर्य गर्नसकेको खण्डमा भने केही सहज हुनेछ । आज भगवान श्री गणेशजीको भक्ति बढाउनु हितकर हुनेछ ।
मकर राशिहुने व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन पराक्रम बढ्ने खालको गोचर रहेको छ । साहस, पौरख एवं कान्तिमा वृद्धि हुनेछ भने शत्रुमुकाविलामा सफलता मिल्नेछ । आँटेताकेको काम अगाडि बढाउन सकिने छ । उद्याम एवं व्यवसायमा सफलता मिल्न गई मनग्य लाभ हुनेछ । समर्थक एवं प्रसंशकहरु बढ्नेछन् । आज तपाईले लम्बोदर श्री गणेशजीको सेवा श्रद्धा तथा दर्शन भक्ति गर्नाले सफलतामा वृद्धि हुनेछ ।
कुम्भ राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन सकारात्मक मानिहाल्न अल्लि मिल्दैन तथापि बुद्धि पुर्याउनसके ज्ञानार्जनको क्षेत्रमा प्रगति गर्नसकिने छ तर विद्याको उन्माद बढ्ने हो कि भन्ने डर पनि देखिन्छ । जन्मकालमा प्रतिकूल ग्रह हुनेहरुलाई शीर तथा मस्तिष्कसम्बन्धी समस्या आउनसक्ने खतरा पनि देखिन्छ । विनापरिश्रमको धनार्जन गर्ने चेष्टाले परिणाम राम्रो नदिनसक्ने छ, ख्याल गर्नुपर्ला । फजुलका विषयमा चेष्टा दिँदा आफ्नो मुख्यकाम थाति रहनसक्ने सम्भावना छ । वस्तुपरिस्थिति बुझेर अघिबढ्नु र घमण्डललाई संयम गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । पाँच अङ्क, रातो रङ्गको प्रयोग र भगवान श्री गणेशजीको सेवा उपाशना गर्नु हितकर हुनेछ ।